Honey & Sweeteners - MyanTrade
Why buy honey from Myanmar?
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပျားရည်ကို ဘာကြောင့် ဝယ်သင့်သလဲ?
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျားရည်မျိုးပေါင်းများစွာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထုတ်ယူရရှိနိုင်သည့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ အလွန်စုံလင်စွာရှိပါသည်။
- ပျားရည်ကို ရိုးရာနည်းဖြင့် ပမာဏအနည်းငယ်ထုတ်လုပ်ပြီး ကျေးလက်ဒေသများမှ ပျားမွေးမြူရေးသမားများအတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေကို ရရှိစေပါသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပျားများကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ရောဂါများကင်းစင်ခြင်းကြောင့် ပဋိဇီဝဘေး များနှင့် အခြားဆေးများကို အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။
မြန်မာ့ပျားရည်ပြည်ပတင်ပို့မှုကဏ္ဍ(The Myanmar Honey Export Sector)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ၌ ပျားမွေးမြူသည့်ဧရိယာ (၆၇၀)ဟက်တာခန့်ရှိပြီး နှစ်စဉ် ပျားရည်တန်ချိန် (၄၀၀၀) မှ (၅၀၀၀) ခန့် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ ပျားရည်ထုတ်လုပ်မှုမှာ မှန်မှန် တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီပေါင်း (၆)ခုမှ နှစ်စဉ်ပျားရည်တန်ချိန် (၂၀၀၀) ခန့် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သော ပျားရည်ထက်ဝက်ခန့်ကို ဆီးသီးပင် (Jujube trees) မှ ထုတ်လုပ်ရရှိပါသည်။ အခြားပျားရည်ထုတ်လုပ်သော အပင်များမှာ အီသီယိုးပီးယားနေကြာပင်(Niger) ၊ နှမ်းပင်၊ နေကြာပင်၊ သုံးဆင့်ပန်းပင်၊ ၀ါဖြူပင်၊ ပဲစင်းငုံပင်၊ တောပန်းများနှင့် လိုင်ချီးပင်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပျားရည်စုစုပေါင်း၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို တောပန်းပင်များမှ ထုတ်ယူရရှိပါသည်။ ရာဘာပင်မှ နှင်းစက်ပျားရည်(honeydew) ကို ထုတ်ယူရရှိပါသည်။ ထောပတ်ပင်နှင့် မက္ကာမေး ဒီးယားပင်များမှ ပျားရည်ထုတ်လုပ်ရရှိရန် အလားအလာများစွာရှိနေပါသည်။
မြန်မာပျားရည်အများစုမှာ ပဋိဇီဝဆေးနှင့် ပိုးသတ်ဆေးကင်းစင်ပါသည်။ ပျားရည်ကို အခြားပစ္စည်းများ (ဥပမာရေ စသည်) နှင့် ရောနှောရောင်းချခြင်းများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့ရလေ့ မရှိပါ။ ပြည်သူ့ရေးရာကဏ္ဍများနှင့် နိုင်ငံတကာအလှူရှင်များက ယခုအခါ ပျားမွေးမြူရေး အလေ့ အထကောင်းများနှင့် (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP))အခြေခံမူများ(ဘေးအန္တရာယ်ဆန်းစစ်ရေးနှင့် အရေးပါသော လုပ်ငန်းအဆင့်များကို စောင့်ကြည့် ထိန်းချုပ်ရေး)စသည့် ပျားရည်ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဦးတည် ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။
Read the full report on Myanmar’s honey export capabilities